AIRTOX Kabaha badbaadada GL6 - AIRTOX
AIRTOX Kabaha badbaadada GL6
Kabaha amniga sare ee farsamada GL6 waxaa lagu gartaa dhowr ah super features, sida lakabka kacdoonka kahortagga gelitaanka: Whitelayer® - adag sida birta oo jilicsan sida maro.
Sare ee GL6 waxaa lagu sameeyay sheyga microfiber-ga cusub iyo kan ugu hormarsan suuqa. Qalabkaani wuxuu bixiyaa culeys fudud, neefsashada iyo sifooyinka biyaha celiya. Sidii gunno dheeri ah, waxaan sidoo kale dib u hagaajinay taam ahaanshaha kabaha, oo hadda ka fiican sidii hore. Naga Airtox Injineerada waxay ku guuleysteen inay abuuraan xirmo ballaaran, isboorti oo kabaha ka dhigaya mid la mid ah galoofiska.
AIRTOX Kabaha badbaadada GLC G-Force